တူနိုင်တဲ့ မတူတဲ့အတွေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Different » တူနိုင်တဲ့ မတူတဲ့အတွေး	4
Posted by Ko out of... on Jan 24, 2015 in Think Different |4comments
အများနဲကမတူ တစ်ကောင်ထီးတည်း နားနေသည့် ဇင်ယော်ဌက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီး အောက်ပါ အတွေးလေးများဖြစ်မိပါသည်….
– ရေပြင်ပေါ်တွင် ပေါလောပေါ်နေသည့် တူညီသောအရာဝတ္ထုတခုအပေါ်တွင် ဌက်လေးတွေ အတူတကွ နားခိုနေထိုင်နိုင်ကြသေးတာဘဲ…
တိရိစ္ဆာန်တွေထက်အသိတရား ရှိသည့် ကျွန်တော်တို့ လူးသားတွေဟာ တခုတည်းသော ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ အတူတကွ မနေနိုင်ဘူးလား?….
– အများစုသောဌက်လေးတွေဟာ အနည်းစုတကောင်းတည်းသောဌက်ကလေးအပေါ်မှာ အနိုင်မကျင့်သလို တူညီသော အရာဝတ္တုတခုပေါ်ကနေ ငါတို့နဲ့ မတူ ငါ့ရန်သူဆိုပြီး ရန်မမူသလို တူညီသော အရာဝတ္တုပေါ် မတွန်းချပါဘူး….ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလည်း ဒီမတူညီသောအမြင်တွေ အပေါ် အတူတကွမနေနိုင်ဘူးလား?…
– အများစုသောဌက်လေးတွေဟာ အနောက်ဘက်ကို ခေါင်းမူတော့ အနောက်ဘက်ကမြင်ကွင်း အလှကိုသူတို့တွေမြင်သလို တကောင်းတည်း မြောက်ဘက် ကိုလှည့်နေသည့် ဌက်လေးဟာလည်း မြောက်ဘက်က မြင်ကွင်းအလှကို သူမြင်မှာဘဲ မဟုတ်လား?
ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလည်း အမြင်မတူသည့် အနည်းစုလူသားတွေအပေါ်ကို လက်တွဲခေါ်ပြီး အမြင်ဖလှယ်လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား?…
– ဌက်ကလေးတွေဟာ အမျှော်အကြောက်တရား ကင်းမဲ့စွာနဲ့ အပေါ်ကောင်းကင်းကိုလည်း မော်မကြည့် သလို အောက်ကိုလည်း မငုတ်ကြည့်ကြပါ
ကျွှန်တော်တို့ လူသားတွေလည်း လက်တွေ့ တကယ်မမြင်ရသည့် ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးထဲက အရာတွေကို အမျှော်အကြောက်တရား စိတ္တဇတရား ကင်းမဲ့စွာနဲ့ ရှင်သန်လို့ မရနိုင်ဘူးလား?….
View all posts by Ko out of... →	Blog
မြစပဲရိုး says: မှန် ပါတယ် ကိုအောက် ရေ။
ငါဘဲ အမှန် ဆိုတဲ့ အတွေး တွေ ကင်းသွားတဲ့ နေ့မှာ လောကကြီး က ပိုလို့ နေပျော်သွားမယ် ထင်ပါရဲ့။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက် says: အမြင်တွေ ကို ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်…
Mike says: .ဒေါ်မြစပဲရိုး တင်ဖူးတဲ့ “Imagine” သီချင်းစာသားလေးတွေသတိပြန်ရသွားတယ်
.Imagine there’s no heaven
.It’s easy if you try
.No hell below us
.Above us only sky
.Imagine all the people
.Living for today……………
.“ခွင့်တူညီမျှ ၀ါဒဖြူစင်တဲ့မြေ” တကယ်မဖြစ်သေး၍….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: လူသားကို ထာဝရဘုရားသခင်က.. ဖန်တီးတယ်တဲ့..။
ကျုပ်လေ့လာမိသလောက်တော့.. လူသားက. ဘုရားသခင်ကိုဖန်ဆင်းထားတာပါ…။
လူသားက.. ငရဲလည်းဖန်ဆင်းတယ်..။ ဘုံကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်..။
Comments By Postဗီယက်နမ်လား….အနောက်နိုင်ငံလား…???? - “ဘီလူးကြီး”ogre - သျှားသက်မာန်Holland ဒေသ Giethoorn မြို့ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik3D လက်ရာများကိုခံစားနားဆင်ဖို့- သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ - Thint Aye Yeik - aye.kkVenice မြို့ပေါ်က အလှဆုံး နေရာ (၆) ခု - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဗဟုသုတဟင်းလင်းအိုးကြီး - သျှားသက်မာန် - kaiKrabi ကို သွားလည်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၀ ခု - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်"မပြန်လမ်း"တဲ့လား - ပြန်ချင်စိတ်က အဓိကပါကွယ်... - Thint Aye Yeik - ဇီဇီ" ငါ့ ကြောင့် ငါ အခါခါသေရ၏ " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - kai"စိတ်ငှင်ခြင်း " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - aye.kkတရားရလိုပါလျှင် - aye.kk - ဂျစ်စူNorway နိုင်ငံ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံး လည်ပတ်စရာများ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - Thint Aye Yeik၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ လည်ပတ်သင့်တဲ့ အာရှက အလှဆုံး ကျွန်း ၁၅ ခု - Thint Aye Yeik" လမ်းပေါ်မှာ " - Thint Aye Yeik - aye.kkဓါးတွေကို ထိုင်မျှားမိတဲ့သူ - Thint Aye Yeik - ဇီဇီ" ခွဲ " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - ဂျစ်စူဂွဇွတ်တောင်ပေါ်မှ မျှစ်ကြော်ပြုံး၏ စိန်ခေါ်သံ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - သျှားသက်မာန်အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ တတ်ကျွမ်းလိုသော် ( ၈) - ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့် - ဂျစ်စူ - ဇီဇီသေးတာက တခါတလေ ကြီးတာထက် အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်တဲ့ အိမ်သေးသေးလေးတွေ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - သျှားသက်မာန်" အပူနဲ့လူ" - aye.kkAngkor Wat ၊ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတ ဘုရားကျောင်းများ အကြောင်း တစေ့တစ်စောင်း - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဇော်ဂျီယူနီမှသည် ညဈေးဆီသို့ - ဇီဇီ - manawphyulayမှော်ကမ္ဘာထဲကို ခေါ်သွားဦးမယ် ဂျေကေရဲ့ Fantastic Beasts - ဇီဇီ - Thint Aye Yeikရှေ့တန်းမှ အမှတ်တရများ - ဇီဇီ - Thint Aye Yeik" မော တဲ့ နေ့" - aye.kk - Thint Aye YeikJapan နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Zero-Emissions Bar - Thint Aye Yeik - kai"ဖြေ " - Thint Aye Yeik - aye.kkဗီယက်နမ် နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဟနွိုင်းမြို့မှတောင်ပိုင်း ဟိုချီမင်းမြို့ သို့ ခရီး - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ - ကထူးဆန်း - Thint Aye Yeikကျုံထော်ရေတံခွန်ပြန်ဖွင့်ပြီ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikသင့်ရဲ့ သဲကန္တာရ အသေးစား စွန့်စားခန်းအတွက် သဲသောင်ပြင် ၅ ခု - သျှားသက်မာန် - kaiCategory	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10Anzartone (95532 Kyats )alinsett (93395 Kyats )kyeemite (91373 Kyats )weiwei (83114 Kyats )SP (80866 Kyats )padonmar (76894 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59014 Kyats )monmon (58579 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB